माया प्रितिको गित गाउँन थालेपछि बल्ल चिन्न थाले :- भूमिका शाह Darpansansar News
छोरी मान्छे त्यो पनि नेपाली संस्कार कहाँ त्यति सजिलो छ र ? संम्भावना धेरै थियो तर परिवेशले रहर , चाहनाहरू मर्दा रहेछन । मध्यम वर्गिय परिवारबाट हुर्किएर घरको अवस्था सन्तुलन गर्दै नेपाली कला संस्कृतिलाई प्रेम गर्न कहाँ सजिलो छ र ? अझै हाम्रो समाज कला र संस्कृतिको मूल्य बुझ्ने परिपक्क अभिभावक भएको छैन ।
नारीले त धेरै शोषण , तनाव र अवहेलनाका वावजुदका विच पनि यो काडेयात्रा पार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अझै संगित त ग्लामरको क्षेत्र हो । माया र विश्वाश भन्दा शंका र अनुमानका भरमा विवादास्पद वनाइन्छ र कसैको त घर संसार पनि सकिन्छ । पहिला त अप्ठ्यारो लाग्थ्यो तर विस्तारै लागि परिरहदा आत्म विश्वाशमा वृद्धि हुदो रहेछ ।
सानै उमेरमा स्टेज चढेर गुनगुनाए पनि देश भक्तिका गित गाउँनेलाई कसैले चिन्दा रहेनछन । समय सापेक्ष माया प्रितिका रसिला अनि ठट्यौला गित गाउँन थाले पछि अहिले चिनिने भएकी छु । एक दर्जन लोक गितका एल्बम , आधुनिक गितहरू , लोक पप साथै संगित संयोजन , शब्द रचना जस्ता क्षेत्रमा सृजनशिल भएर क्रियाशिल हुदाँ पनि व्यवशायिक तवरले शान्तिको स्वाश फेरिएको छैन र पनि कला संगितको मोह र मायाले टाढा हुने संकेत छैन ।
स्वार्थ बोकेर सहयोग गर्न आउँछन । स्वाभिमान बेचेर सम्झौता गर्न मन मान्दैन । त्यसैले करीअरमा गति सुस्त छ तर आफ्नै सिप र क्षमतामा गुन गुनाउँन पाउँदा थोरै प्रगति भए पनि एउटा छुट्टै शान्ति छ मनमा ।
अरूको दुःख र पिडाले बढि दुःखी बनाउँछ । आफ्ना सांगितक यात्रालाई रोकेरै भए पनि पिडामा छटपटिनेहरु संग मन साटेकी छु । उनीहरूलाई सहयोग गर्दा आउने मुस्कानले मलाई आनान्दित बनाउँछ । थोरै भए पनि बाढेर बाच्ने गरेकी छु । अब त बानी नै परेछ ।
दोश्रो पटक युके भ्रमणमा छु । १३ वटा भन्दा बढि स्टेज प्रफमेन्स गरिसके यहाँ , ४ वटा कार्यकम अझै बाकी छ । प्रवासमा नेपाली लोक संगितका पारखीहरु देखेर मन नै दङ्ग हुन्छ । जब नेपाली भाका गुञ्जिञ्छ , तपाईहरू रमाएको देख्छु अनि एउटा अजिवको हौसला र प्रेरणा आउछ त्यसैले त म यहाँ छु भूमिका शाह ।